Nezvedu - Shenzhen Yuebaixiang Technology Co., Ltd.
YIwe Baixiang Technology Bokaanga achirima kufa-kucheka chakuvhuvhu tekinoroji kwemakore makumi maviri, achinyanya kuigadzira, kuunganidza vanhu vepamusoro, akatsunga kuve akanakisa kufa-kucheka kufa muChina, uye kuita kuti nyika isanetse kufa-yekucheka basa. Fekitori yedu inovhara nzvimbo inopfuura zviuru zvitatu zvemamirimita. Kune anopfuura zana matarenda muR & D uye kugadzirwa.
Kune angangoita makumi mashanu ekunze chaiwo CNC yakakomberedza banga rakapetwa banga rekutema michina, michina yemalaser, yakadzika banga kutenderera banga rekuongorora michina uye chaiyo yekuyera michina. Etching banga, Hardware muforoma, QDC muforoma, inopisa tsikwa ndiro, yemagetsi achiita zvokutemera ndiro, kiramba yechigarire, yematanda banga nebanga repurasitiki, yemagetsi bhodhi, nezvimwewo.
Yue Baixiang anga ari mubanga muforoma indasitiri kwemakore makumi maviri uye akaunganidza zvakapfuma kiriniki ruzivo. Parizvino, anodarika gumi nemaviri maitiro akawana zvitupa zvepasi rose. Kuwedzera kune hunyanzvi mune nharembozha zvishongedzo, zvakaoma uye zvakakwirira-zvakaringana zvigadzirwa (senge yemhangura foil, aluminium foil, tini foil, iron oxide, simbi mesh waya uye zvimwe simbi nesilicon rabha, grafiti jira, UPE Yakareba), PC, PVC , PET nezvimwewo zvigadzirwa kuti zviitwe otomatiki mashandiro) uye yakachena uye yakachena maererano nekubviswa kwemarara, 100% yakatsiga uye yakasimba! Ese mafuru akaitwa matatu kana mana bvunzo dzakaomarara (banga kumucheto kuongorora, kukwirira uye kwakadzika banga kuongorora, kufa-kutema chigadzirwa kuongorora).
Kugutsikana kwako ndiko kutsvaga kwedu kwese. Isu takagadzirira kushanda pamwe nekambani yako kuti tibatsirane uye tibudirire kuhwina-kuhwina mamiriro! Gamuchirai vatsva nevakuru vatengi kuti vashanyire uye vatungamirire, uye pamwe chete kukudziridza kufa-kutema furu tekinoroji! Yue Baixiang anotarisira kushanya kwako uye kutungamira!
Pane makumi mashanu seti dzeCNC chaiwo ekugadzirisa michina, hombe-yakakura laser michina, otomatiki banga-yekukotama muchina uye gumi seti yekunyora muchina, kufa-kutema mitsara yekubatanidza uye 3-mativi ekuyedza michina mukambani medu.
Tine nyanzvi R & D timu.
Nemakore makumi maviri ezviitiko zvehunyanzvi mumunda.
Yakaperera kumeso kupfupisa iyo nguva yekushandisa kugadzirisa uye nekuvandudza kugona kwekugadzira.
Yakakwira chaiyo kufa-yakatemwa zvigadzirwa uye kusimba chitarisiko kufa-kutemwa kudhinda zvigadzirwa zvinogona kugadzirwa nemuedzo uye kushandiswa kweDies.
Professional Die-akacheka musanganiswa mitsara uye punching michina, inogona kugadzirisa zvigadzirwa uye kuyedza kufa kwevatengi.
Rega nyika ive yakaoma kufa yekucheka.
Tungamira banga banga kuti uve indasitiri yakakosha pasirese.
kuva wekutanga muChina banga banga indasitiri na2024.
Maitiro edu ebasa
nehana uye vanokurumidza kunamatira kuvimbiso.
Iyo mhando yezvigadzirwa yakaenzana hunhu.
kugona, hunyanzvi, basa, timu, kuvimbika.
Laser Kufa, Dongo-Kudonhedza Kudonhedza Michina Inofa, Mask Michina Die, Auto-Chinyorwa Kuzadza Chinyoro Kufa, Mirror Surface Inotema Die, Simbi Yakafa Kunyora,